SOOMAALILAND OO NOQOTAY SHACABKA KELIYA EE NOLOSHOODA KA DHEEREEYEY DARAASAD CUSUB.‏
Monday January 05, 2015 - 23:39:41 in Maqaallo by
Bani,aadanka illaahay abuurtay waxa nolosha dhabta ah bara kuna cadaadiya dhawr waxyaabood kuwaas oo kala ah 1: gaajo Gaajadu waa waxyaabaha ugu waaweyn ee Ku khasba qofka bani,aadamka ah inuu ogolaado dhibaatada
soomarta si uu ugu dhabar adaygo hadba duruufaha lasoo gudboonaada si uu uga baxo kaasoo uu ogolaanayo wixii lagu kelifo
2: xadidhaafka tirada dadka
Dadyowga tiradoodo badan tahay waxay kamid tahay waxyaabaha dadka ku khasba inay ogolaadaan duruufaha siday u noolaan lahaayeen sida wadamada hindiya iyo jayna .
3:aafooyinka dagaalada iyo gumaysiga
Aafooyinka dagaalada iyo gumaysiga illaa heer adoonsi gaadha waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka nolosha u caadiya taasoo qofka bani,aadamka ah Ku kelifta unuu falowgeed qabto siduu u noolaan lahaa
4: cimilooyinka dhibaatada leh
Cimilooyinka dhibaatada leh sida wadamada qabow ee yurub iyo amerika iyo kuwa cidhifka aduunka oo kale iyana waxayka mid tahay waxyaabaha dadka noloshooda rabeeya.
5: kunoolaan shaha meelaha dhibaatooyinka leh sida dhulka saxaarayaasha iyo jasiiradaha ay baduhu ku wareegsan yihiin kuwaas oo iyana kamid ah waxyaabaha dadka noloshooda ku adkeeya siday u noolaan lahaayeen.
6: hantigoosiga oo doorarka ugu waaweyn uguna muhiimsan kaqaata nolosha bani,aadamka.taasoo aanay dadku waxba isasiinin caalamka xoogiisuna isticmaalo
Hadaba dhamaan waxyaabahaas aynu soosheegnay shacabka soomaalilaan midka mid ah oo ay soomareen majirto.
Waxa keliya oo soomaray iyagoo samaystay gudin iyo hangool iyo waran iyo toorey si ay isugu difaacaan xoolahoodana ugu ootaan .
Dumarkuna waxay soosaareen aqalka soomaaliga iyo wixii wax lagu tolo sida maxaadhka mudaaga xadhkaha guriga lagu sameeyo laguna dhiso siday ubadkooda uga ilaashan lahaayeen bahalaha,roobabka iyo dhaxanta.
Hadaba intii lasoo gaadhey xiligan dawladnimada waxaa marba marka ka danbaysa meesha kasii baxaya noloshii hore ee ay soomareen shacabka soomaalilan.
Hadaba xiligan aynu joogno waxay ku jiraan shacabka soomaalilaan nolol aanu qiyaasi karayn works bani,aadamka ahi taasoo loo Malayn karo nolosha dad waalan .
Iyadoo 80% dadka wixii soogala iyo wixii kabaxa ay badan yihiin waxa kabaxa taasoo maanta waxkale daayoo golaha geela iyo guriga miyiga lagu qayilo isagoo aan dhulkoodana ka bixin lagagana qaado lacag adag oo lagu qiyaasay 500,000 us dollar.maalintii.
Qofka magaalada joogaana uu isticmaalo maalintii ugu yaraan 20 us doller .isagoo aan weliba shaqayn.amaba aanay ku filayn yowmiyadiisu .taasoo aanayku jirin masaariifta reerkiisu.
Nolosha noocaas ahi qofka bani,aadamka ah waxay Ku keliftaa inuu waasho iyo inuu dhibaato geysto si uu u helo baahidiisa maalinlaha ah
Hadaba waxaanku talinayaa dhawr waxyaabood oo ay kamid yihiin 1: inlabeero qaadka lagana beero meelkasta oo uu kabaxayo. 2 :
In lagu degdego sidii loosoo saari lahaa khayraadka dalka siloo daboolo dhibaatada ay keentay noloshan khayaaliga ah ee maanta lagu nool yahay. 3 : in loosameeyo wacyi gelin aadu weyn oo diin iyo waxgaradba leh .4: in dhalin yarada lagu baraarujiyo siday u shaqayn lahaayeen intay meel iska fadhiyaan kul lagu yidhaahdo ururiya xashiishka Laguna siiyo shahaadooyin iyo abaal marino.
5: in siweyn loola shaqeeyo dawlada si ay dhakhso ugu soo saarto batroolka iyo macdanta iyo khayraadka dalka silooga baxo noloshan kalifi doonta waxyaalo kaxunxun waxyaabahan maanta taagan.6: inlaga baxo qabaliga iyo kala qoqobida wadajirna horumar lagu raadiyo.
Qore maxamed aadan axmed